Wasaaradda Arriimaha Ganacsiga ee Gobolka Washington - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Archives Tag: Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Gobolku wuxuu ku boorinayaa milkiileyaasha iyo shirkadaha ka shaqeeya guryaha ganacsiga inay dib u eegaan liiska dhismayaasha cusub ee la soo dhejiyay oo ku xiran heerka XNUMXaad ee heerka waxqabadka dhismooyinka nadiifka ah ee Washington.
Milkiilayaasha dhismuhu sidoo kale waxay sahamin karaan $ 75 milyan oo ah barnaamijka dhiirrigelinta hore si ay ugu bilaabaan madaxa bilowga hagaajinta waxtarka tamarta. OLYMPIA, WA - Qeybaha dhismayaasha ayaa ah wasaqda labaad ee ugu weyn ee wasaqeeysa kaarboon ka dambeysa gaadiidka. Maalgashiga dhismaha waxtarka tamarta ayaa ah habka ugu kharash jaban ee si weyn hoos loogu dhigo qiiqa gaaska lagu sii daayo. Xalka jarista wasakhda dhismaha waxay kujirtaa waxtarka tamarta - sida ugu dhaqsaha badan, ugu jaban ee lagu yareeyo qiiqa kaarboon iyo
Hogaamiyaasha gobolada waxay ku boorinayaan wadayaasha inay sii qorsheeyaan markay tahay shidaalka inay sii kordhaan maadaama safarka wadooyinka uu sii kordhayo inta lagu jiro xilliga safarka
Barnaamijyada taleefannada casriga ah ayaa ka caawin kara darawallada helitaanka saldhigyada gaaska ee furan maaddaama yaraanta sii socota ee darawallada gawaarida shidaalka ay sababi karto dib-u-dhigis la gaarsiiyo Maalinta Xusuusta Maalinta ayaa soo socota, iyadoo la socota bilaabista aan rasmiga ahayn ee xilliga safarka guga iyo xagaaga. In kasta oo safarka diyaaraduhu uu si isdaba joog ah u kordhayo, tiro ka badan-celcelis ahaan socotada ayaa la filayaa inay ku safraan baabuur masiibada awgeed. Hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyadu waxay ku dhiirrigelinayaan safarrayaasha inay horay u sii qorsheeyaan markii ay kordheen